Ndị na-emepụta ọgwụ na ndị na-emepụta ọgwụ - China Pendant Factory
Dlọ ọrụ TD-TS-100 na-eweta ọgwụ na-arụkọ ọrụ ọnụ maka Hospitallọ Ọgwụ
TD-TS-100 na-ezo aka n'ihe gbasara ahụike. Ọ bụ ezigbo akụrụngwa inyeaka maka nlekọta kpụ ọkụ n'ọnụ na ime ụlọ ọrụ, ụlọ mberede, na ICU.
QF-JX-300 China ICU Medical Iche Bridge Bridge Pendant maka Hospital
QF-JX-300 na-ezo aka na akwa akwa akwa ICU, nke bụ ngwa enyemaka enyemaka ahụike dị mkpa na ngalaba ICU nke oge a, ọkachasị nke mejupụtara etiti akwa, ngalaba akọrọ, na ngalaba mmiri.
ZD-100 ICU Ejiri Mkpọrọ Ahụike Ahụike Maka Hospitallọ Ọgwụ
ZD-100 na-ezo aka na pendant kọlụm ahụike, nke bụ ụdị usoro enyemaka enyemaka ahụike maka ezubere maka ngalaba ICU na ime ụlọ ọrụ. Ejiri usoro kọmpat, obere oghere na ọrụ zuru oke mara ya.